Iyiphi inyanga uJuli
Iyiphi inyanga kuJuli waseJalimane?
Uyazi ukuthi igama elithi Juli lisho ukuthini?
Iyiphi inyanga yonyaka uJuli?
Igama lesiJalimane elithi Juli lisho inyanga kaJulayi. UJul kusho ukuthi uJulayi yinyanga yesi-7 yonyaka.
Kuwebhusayithi yethu, kunezinyanga nezinkathi zemisho yesiJalimane nesampula. Sifunde inyanga kaJuli, uma ufisa ungafunda zonke izinyanga zaseJalimane nezinkathi zaseJalimane. Chofoza ukuthola eminye imininingwane: Izinyanga nezinkathi zaseJalimane ngezikhathi zesiJalimane
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-11 ezedlule, ngoJanuwari 23, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoJanuwari 23, 2021.
Izithelo nemifino yaseJalimane
Amagama esiJalimane aqala ngohlamvu K
Yini i-Donnerstag, i-Donnerstag?
Iyiphi inyanga u-Oktober